I-Geoinformatics, uhlelo lwamva nje luka-2009 – Geofumed
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Geoinformatics, ukushicilelwa kwamuva 2009
Geoinformatics, ukushicilelwa kwamuva 2009
Oku, ngokombono wam yenye yeejenali ezibekwe kakuhle kwi-geospatial issue, ivale i-2009 ngesitampu esinobuchule; kwiintlelo zayo ezisi-7 igcine a uphononongo olucwangcisiweyo lwe software free kunye nezixhobo zepografi, kwisithuba sokugqibela (uNcedo 8 ka-2009) uthetha ngokubanzi kwiintsingiselo eziphawulweyo ezikhokela umba wejoloji kunye nezehlo zamanye amaqonga angasimahla kokusingqongileyo.
Apha ndishwankathela imixholo ephambili.
izixeko zedijithali kunye nendlela yokufunyanwa kwe-3D Geo inike I-LandXplorer Iimpawu zesimbo sikaGoogle soMhlaba.
IGIS yomntu wonke, inguqulelo entsha ye-ArcGIS Explorer, ngoku enobuchule obungakumbi kwaye njengoko ubona… iRibhoni njengento engenakuguqulwa.
inkomfa yomsebenzisi ukusuka ESRI / Europe
I-GIS, iCadastre kunye nerejista yomhlaba. Oku yi udliwano-ndlebe noNick Land, ositshela ngombono we-ESRI malunga ne-cadastre kunye nendlela ababona ngayo amanyathelo afana ne-INSPIRE, i-Cadastre 2014 kunye ne-WPLA.
Kukho inqaku malunga neSimpoziyam Uphefumulelwe
Akukho ziphononongo ezithile, kodwa kwintengiso isikhululo sisonke sisishiya silindele ISpectra yokugxila. Kufuneka nje ubone ukuba wonwabe.
Kwakhona phakathi kwentengiso ye-SuperGeo ivelele nayo ICD yokuFunda yeGIS kunye ne-SuperGIS Image Server
Nguwo umxholo ophakathi yolu hlelo, apho umhleli omfutshane ukrwela umdla wenqaku elinomdla kumaphepha angama-24-26 malunga neentsingiselo, umda kunye nemingeni ingqikelelo yolawulo lwedatha ye-intanethi enayo kunye nendlela imekobume ye-geospatial esebenzisana ngayo kakhulu.
Ngokuqinisekileyo i-2010 iya kuba ngunyaka wokuphononongwa kwezicelo zokupapasha iwebhu ukunika ukuqhubeka kwesi sihloko, amanqaku afana nala:
I-Navteq ifuna ukuba ufikelele kwindawo oya kuyo
I-Geolocation kunye nenkqubela phambili yayo ekuhambeni kwexesha.
Kukho ezinye izihloko, kufanelekile ukukhangela kwaye uyikhuphele kwi-pdf ukuze iqokelelwe.
AutoDesk Bentley Systems ESRI Umhlaba ka-Google Magazines